Karaiba: Inona No Nitranga Tamin’ny 2012 (Tapany 1) · Global Voices teny Malagasy
Karaiba: Inona No Nitranga Tamin'ny 2012 (Tapany 1)	Voadika ny 07 Febroary 2013 2:47 GMT
Zarao: Tamin'ity taona ity, nifarana tamin'ny fitokonana tsy hihinan-kanina izay nahavaka ny saina, ireo tranga tao amin'ny tontolon'ny bilaogy Karaiba. Tamin'ny Janoary 2012, maty noho ny fitokonana tsy hihinan-kanina nataony nandritra ny roa volana tany aloha ilay Kiobana iray gadra noho ny firehany, Wilman Villar Mendoza. Tamin'ny 5 Desambra 2012, namarana ny 21 nitokanany tsy hihinan-kanina ny Dr. Wayne Kublalsingh, teratany avy ao Trinidad mafàna fo amin'ny resaka tontolo iainana , niainga avy amin'ny fanomezan-toky azony fa hampanao fanadihadiana tsy miankina mikasika ny ampahan-dàlana natolotra izay nolavin'ny vondrona misy azy ny governemanta, ny Hetsika “Highway re-route”, na “Hetsika familiana soritra ilay lalambe migodàna) ary ireo Vondrom-piarahamonim-pirenena sivily isan-karazany. Milaza ny hamaron'ny hadisoam-panatenana tsapan'ny vahoaka Karaibeana mikasika ny fahaizan'izy ireo mihaino ny feony ity firohotana any amin'ny fitokonanana tsy hihinan-kanina ity. Ity misy jery todika – isam-pirenena – eo amin'ny olana sasany amin'ny faritra izay niteraka resabe misy lanjany teo amin'ny aterineto tamin'ity taona ity…
Ny Fifidianana no lohahevitra mafana nahaliana ny tontolon'ny bilaogy Bahamiana tamin'ity taona ity, miaraka amin'ny mpisera anaty aterineto midikiditra etsy sy eroa, rehefa nivoaka ny valim-pifidianana. Nahazo governemanta vaovao ny firenena: ny Progressive Liberal Party (PLP), izay nitazona ny toeran'ny mpanohitra teo aloha teo amin'ny Parlemanta, no lany teo amin'ny fahefana izay antsoin'ny mpitoraka bilaogy hoe fandresena “mandravarava / miendrika tany mihotsaka”.
Saika tsy azo hinoana ny fahirano ara-toekarena nisy efa ho dimampolo taona, nefa izany no zava-nisy tany izay resahan'ireo Kiobana mpitoraka bilaogy tamin'ny faha50 taonan'ny fahirano nataon'i Etazonia tamin'ilay nosy. Ny ampahany tena mahaliana ve? Ny mahasamihafa ny fomba fijerin'ny Kiobana izay mbola monina ao Kioba sy ireo isan'ny any ampielezana.
Niteraka fahavitrihana betsaka ihany koa teo amin'ny tontolon'ny bilaogy Kiobana ny Fitsidihan'ny Papa Ray Masina tany Kioba tamin'ny volana Martsa, nahitàna marobe nandray ny dian'ny Papa ho fanohanan'i Vatikana ny fitondran’ i Castro, na dia eo aza rakitra mampiahiahy momba ny zon'olombelona ananany. Ny tsikeran'ny mpitoraka bilaogy adaladala taty aorina dia ny tsy nahafahan'ny Papa nihaona tamin'ireo vondron'ny mpanohitra tao an-toerana; nivoatra ny raharaha rehetra rehefa nangatahan'ny Archbishop-n'i Havana ireo mpanao fihetsiketsehana izay nitaky ny fahafahana ho an'ny gadra politika sy ny fanajanonana ny fanenjehana ireo mpanohitra ny fitondrana, mba ho esorina tsotra izao amin'ny fiangonana. Tsy dia misy dikany intsony avy eo ny fanambarana nataon'ny Archbishop taorin'izay.
Papa Benoit XVI; CC sary avy amin'ny Fiangonana katolika (Angletera sy Pays de Galles)
Tamin'ny volana May, niresaka mikasika ny fitsidihan'i Mariela Castro any Etazonia ny mpitoraka bilaogy Kiobana, mikasika ny fahaiza-manaony raha Mpitantana ny Centro Nacional de Educación Sexual-n'ny firenena (Ivo-toeram-panabeazana Nasionaly hoan'ny fitaovam-pananahana), ary koa ny toeran'ny zon'olombelona eo amin'ny nosy, arahina fangatahana fanazavana avy amin'ny Komitin'ny Firenena Mikambana Manohitra ny Fampijaliana sy ny fijerena ny fanararaotana ny zon'olombelona voavingavinga. Tonga niaraka tamin'ny fanadihadihana lalina ihany koa ny haino aman-jerin'ny fahalalahana eo amin'ny nosy.
Naoty iray tsara kokoa no hita raha tena sondrina tamin'ny Click Festival tany Kioba ireo mpitoraka bilaogy,izay nifantoka tamin'ny Aterineto sy ny Fiarahamonina tany Kioba, ary ny anjara asan'ny teknolojia izay tokony hananana ny toerany eo amin'ny hoavin'ny firenena.
Karaiba miteny Frantsay
Iray amin'ny ireo lohahevitra lehibe tamin'ny resaky ny tontolon'ny bilaogy Haitiana tamin'ity taona ity ny fitsarana an'i Jean-Claude Duvalier. Tamin'ny faran'ny volana Janoary 2012, namoaka ny fanapahan-kevitra ny mpitsara mpanao famotorana izay nandinika ny zon'olombelona nanamelohana ny mpanao didy jadona farany tany Haiti i “Baby Doc”, fa “efa tapitra ny fotoam-panenjehana voafetran'ny lalàna” amin'ireo fanararaotana ny zon'olombelona ireo – fa kosa tsy amin'ny fanodikodinam-bolam-panjakana nataon'i Duvalier. Hitan'ireo Haitiana, na ny ao amin'ny nosy izany na ireo any am-pielezana, fa voafàfa mora foana ny heloka lehibe niampangana ity mpanao didy jadona nampahatahotra teo aloha ity ary ny nandehanany tany amin'ny fitsaràna dia nahazoany zara fa sazy tamin'ny fanodikodinam-bola tsy mazava.
Wyclef Jean; CC sary nalain'i jdlasica
Tamin'ny Aogositra, tratry ny Rivo-doza tropikaly Isaac ny nosy ary roa volana taty aoriana, rivodoza karazany hafa indray no nitranga satria niatrika karazana fiampangana mikasika fanodikodinam-bola tsy mazava ny Yéle Haiti, fikambanana mpanao asa soa an'ilay mpanakanto sady mafana fo Wyclef Jean. Tamin'io volana io ihany koa dia namela takaitra indray tao Haiti ny natiora, tamin'ny endrika rivodoza goavana Sandy.
Dia mbola navoakan'ireo mpitoraka bilaogy avy any Martinik sy Goadalopy indray koa ny olana ara-poko, ny fiaviana ara-pirenena, finoana sy ny fifindra-monina, taorian'ireo fanambaràna ara-politika sasany nahabe resaka ary koa ny fifaninanana hatsaran-tarehy “Miss Black France”. Avy any Martinika ny iray amin'ireo lahatsoratra tena niadian-kevitra be indrindra, mikasika ny filazana fanafoanana ny famoahana ilay horonantsary Amerikana “Think Like A Man” tany amin'ireo trano fijerena sarimihetsika an-dry zareo Frantsay , izay niteraka ihany koa fanontaniana maro mikasika ny foko sy ny firazanana. Nitohy ny adihevitra taorian'ny fifidianana ny filoham-pirenena Frantsay; nisy ny resadresaka toy ny hoe ny governemanta vaovaon'i Francois Hollande – izay nampanantena fa hampitovy isa ny lahy sy ny vavy sy ny ministera, ary avy amin'ny foko sy ny kolotsaina rehetra – ve hanendry ireo ministra noho ny fahaiza-manaony sa noho ny foko misy azy.
Vakio ny tapany faharoa amin'ity lahatsoratra ity hahitàna misimisy kokoa izay niseho tamin'ity taona ity tany Goiana, Jamaika ary Trinidada sy Tobago.
Toy izao ny mikasika ireo sary nampiasaina tamin'ity lahatsoratra ity:
– Sarin'i Papa Benoit XVI avy amin'ny Fiangonana Katolika (Angletera sy Pays de Galles), CC BY-NC-SA 2.0
– Sarin'i Wyclef Jean avy amin'i jdlasica, CC BY-NC 2.0
Fahalalahàna mitenyFanoheranaFifidiananaFifindrà-moninaFivavahanaFoko sy FiavianaLalànaMediam-bahoakaPolitikaVoinaZon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT)Zon'olombelona